U-Qalmitaanka Juqraafiyeed ee Kheyraadka Cusboonaysiinta ee hoos imanaya Heerka Washington ee Cusboonaysiinta Portfolio - Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|U-Qalmitaanka Juqraafiyeed ee Kheyraadka Cusboonaysiinta ee hoos imanaya Heerka Washington ee Cusboonaysiinta Portfolio
U-Qalmitaanka Juqraafiyeed ee Kheyraadka Cusboonaysiinta ee hoos imanaya Heerka Washington ee Cusboonaysiinta Portfolio
Waxaa qoray Glenn Blackmon, Ph.D.
Sharciga Madaxbanaanida Tamarta ee Washington (EIA) wuxuu ubaahanyahay in korantada korontada ee cabirkoodu xadidanyahay ay isticmaalaan ilo dib loo cusboonaysiin karo qayb kamid ah tamarta ay u gudbiyaan macaamiishooda tafaariiqda EIA waxay siisaa dabacsanaanta yutiilitida kheyraadka dib loo cusboonaysiin karo ee ay u isticmaali karaan inay ku daboolaan shuruudahan. Si kastaba ha noqotee, sida dowlad-goboleed kasta oo dib loo cusbooneysiin karo heerarka faylalka (RPS), EIA sidoo kale waxaa ku jira xaddidaadda u-qalmitaanka. Kaliya maaha ilaha dib loo cusbooneysiin karo inay u qalmaan EIA. Maqaalkani wuxuu sharxayaa xadka juquraafi ahaaneed ee u-qalmitaanka kheyraadka la cusboonaysiin karo ee hoos yimaada EIA.
Heerka aasaasiga ah ee u-qalmitaanka juqraafi ahaan ayaa ah in kheyraadka dib-u-cusboonaysiinta ay tahay inuu ka yimaado xarun wax soo saar ku leh Waqooyiga-galbeed ee Baasifigga. Haddaba waa maxay "Pacific Northwest"? Montana ma ku jirtaa mise banaanka? Ma waxaa ku jira British Columbia? Hay'addu ma ku isticmaali kartaa kheyraadka dabaysha Wyoming ama aaladda tamar-dhuleedka ee Nevada?
Shaqaalaha baayacmushtarigu waxay helaan su'aalaha sidan oo kale had iyo jeer, waxayna umuuqataa in mugga su'aalaha uu kor usii kacayo waqti ka dib markii shirkado badani ay galaan ganacsiga bixinta tamarta la cusboonaysiin karo ee korantada iyo macaamiisha.
Qeexitaanka "Pacific Northwest": Isku-dhaf adag oo ku saabsan cilmiga biyaha, taariikhda, iyo soohdimaha gobolka
Qof kasta oo eegaya qeexitaanka u-qalmitaanka juqraafi ee sharciga EIA (Cutubka 19.285 RCW) waxay ogaan doontaa jawaabtu inaysan kujirin sharciga gobolka. Markii la abuuray EIA, waxay isticmaashay qeexitaan juqraafiyeed oo laga amaahday a Sharciga federaalka 1980 taas oo dhidibada u aastay Golaha Qorshaynta Korantada Pacific Northwest iyo Qorshaynta Ilaalinta.
Qeexitaankan federaalku waa iskudhaf adag oo xuduudaha siyaasadeed, xuduudaha biyaha, iyo meelaha dhaxalka ah ee iskaashatooyinka korantada ee miyiga. Waa tan qeexitaanka buuxa ee sharciga federaalka:
'' Pacific Northwest '', '' region '', ama '' Regional '' waxaa loola jeedaa-
(A) aagga oo ka kooban Gobollada Oregon, Washington, iyo Idaho, oo ah qaybta Gobolka Montana ee galbeedka Qeybinta Qaaradaha, iyo qaybo ka mid ah Gobollada Nevada, Utah, iyo Wyoming sida ku dhex yaal biyo mareenka Columbia River berkedda; iyo
(B) aag kasta oo laysku haysto, oo aan ka badnayn 75 mayl hawo oo ka fog aagga lagu sheegay cutubka (A), kuwaas oo qayb ka ah aagga adeegga ee macaamil iskaashato koronto oo miyi ah oo uu u adeego Maamulaha Dec. 5, 1980, kaas oo leh nidaam wax qaybsi ah oo ka dhex shaqeeya gudaha iyo dibaddaba.
Qaybta ugu cad ee qeexitaankan waa halka ay ula jeedo xuduudo siyaasadeed oo gaar ah: Dhamaan gobolada Washington, Oregon iyo Idaho ayaa u qalma. Qeyb kasta oo dhalisa dib-u-cusboonaysiin meel kasta oo ka mid ah gobolladaas waxay la kulantaa heerka u-qalmitaanka juqraafiyeed. Sidoo kale, qeexitaanku wuxuu mamnuucayaa mashruuc kasta oo laga sameeyo Kanada, maadaama oo keliya gobollada ama qaybo ka mid ah gobollada lagu soo daray.
Halkaas, qeexitaanka ayaa si aad ah isugu murugsan. Waxay ku tiirsan tahay xuduudaha jireed ee webiga Columbia Webiga, oo ay ku jiraan labada webi ee Columbia lafteeda iyo dhammaan durdurrada si toos ah ama si aan toos ahayn ugu dhex qulqulaya. Xuduudaani way dhib badnaan laheyd, laakiin waxaa lagu balaariyey "meelaha isku xiran". Qodobkani wuxuu ku darayaa aagaggii iskaashato koronto kasta oo reer miyi ah ay macaamiil ugu adeegayeen 1980-kii, illaa iyo inta aaggaasi uusan ka fogeyn 75 mayl xadka wabiga ku saleysan.
Soohdinta juqraafiyeed ee EIA waxaa ka mid ah oo keliya qaybo yar oo ka mid ah Wyoming, Nevada, Utah, iyo California
Qeexitaanka juqraafiyeed ee EIA waa mid aad u murugsan oo dad yar ay weligood fahmi doonaan. Waxay si gaar ah u sheegtaa toddobo gobol, taasina waxay ka dhigeysaa aagga u-qalma inuu u ekaado mid ka ballaaran sida dhabta ah.
Is faham la’aantaan ayaa inta badan ku badan Wyoming, Nevada, Utah iyo California. Gobolladan ayaa lagu xusay qeexitaanka, laakiin aagga saxda ah ee u qalma runti aad ayuu u yar yahay. Tusaale ahaan, Kaliforniya, waa uun aagga dhinaca woqooyi-bari ee daran ee gobolka, halkaas oo ah Dooxada Korantada La Yaabka ah Corp. waa korantada deegaanka. Inta badan afartaas gobol waxay ka baxsan yihiin soohdinta u-qalmitaanka juquraafi ahaaneed ee EIA.
Khariidadda macaamiisha ee BPA ayaa ah hageheena ugu fiican ee juqraafi ahaan
Qaybaha ugu murugsan ee qeexida Baasifigga Woqooyi-galbeed waxay kuxiran yihiin aagagga adeegga ee macaamiisha korontada ee Maamulka Awoodda Bonneville (BPA). Sidaa darteed Ganacsigu wuxuu ogaaday in khariidadda BPA ee aagaggeeda adeegga macaamiisha ay siineyso hagidda ugu wanaagsan ee lagu ogaan karo in meel gaar ah oo dhulka ku taal ay ku taal gudaha ama ka baxsan aagga rasmiga ah ee “Pacific Northwest”. Kooxda BPA ee sawir qaadayaasha (ama khubarada nidaamka macluumaadka juqraafi) waxay soo saareen khariidad tilmaamaysa aagga adeegga. Muuqaal kooban ayaa halkan ka muuqda, laakiin sida ugu wanaagsan ee loo isticmaalo khariidadda ayaa ah online, iyadoo la adeegsanayo muuqaalka zoom si loo baaro goobo cayiman. (Xullo lakabka "Aagga Adeegga BPA" oo ha dooran wax kale.)
Khariidadda macaamiisha BPA
Isticmaalayaasha waa inay maanka ku hayaan afeef sharciyeed kaas oo la socda khariidada macaamiisha BPA, laakiin waxay bixisaa macluumaadka ugu fiican ee la heli karo ee ku saabsan waxa ku jira iyo waxa ka hooseeya Washington EIA.
Xitaa qeexitaankan "Pacific Northwest" ee adag ayaa leh waxyaabo ka reeban
Caqabad dheeraad ah oo ku saabsan kala soocida u-qalmitaanka juqraafiyeed ayaa ah in mararka qaarkood, xadka "Pacific Northwest" uusan macno samaynayn. Ka reebitaankani waa:
Xarumaha Hydroelectric ee tuubbooyinka iyo kanaallada - U-qalmitaanka juqraafiyeed ee mashaariicdan ayaa ku xaddidan xarumaha ku yaal Washington.
Adeegyada gobolka badan - Hay'adda ka shaqeysa gobollada aan ka ahayn Washington waxay u isticmaali kartaa ilo dib loo cusboonaysiin karo gobol kale oo ay macaamiil ku leedahay. Tusaale ahaan, PacifiCorp wuxuu u isticmaalay tamarta dabaysha mashruucyada Wyoming ee kuyaala banaanka soohdinta Pacific Northwest. Qeexitaankani ma khuseeyo xarumaha biyaha, waaxuna waa inay lahaato ama yeelato qandaraas koronto oo muddo dheer la iibsaday ee kheyraadka dib loo cusboonaysiin karo.
Awooda loo geeyey Washington waqtiga dhabta ah - Xadka juqraafiyeed ma khuseeyo hadii korantada "la geeyo gobolka Washington waqti-dhab ah iyada oo aan la qaabeynin, la keydin, ama la qabsan adeegyada." Qodobkaan ma khuseeyo xarumaha biyaha.
Marka laga reebo soo gudbinta waqtiga-dhabta ah waa qurux arcane, iyo sharciga EIA ma qeexayo mid ka mid ah ereyada lagu isticmaalay halkaas. Si kastaba ha noqotee, Ganacsigu wuxuu soo saaray fikrado la talin sanadka 2016 ee kuxiran qodobkaan farsamooyinka korantada korontada ay u adeegsadaan maaraynta nidaamka gudbinta awooda korantada. Waxay bixisaa qaab ay mulkiilaha mashruuca iyo utility-ga Washington u isticmaali karaan si ay ugu qalmaan ilaha ka baxsan gobolka ee hoos yimaada EIA. A daraasad dhawaan by BPA iyo la-hawlgalayaasheeda waxay ku soo gabagabeeyeen iyadoo la adeegsanayo qaabkan, horumariyayaashu waxay u badan tahay inay dhisaan mashaariic dabayl ah bariga Montana iyo u-qalmitaanka waqtiga-dhabta ah ee korantada la geeyo Washington oo u-qalmi doonta Washington EIA.
Qeexitaan toos ah oo toosan ayaa caawin kara
Khariidadda BPA waa kheyraad waxtar leh, laakiin xitaa si ka wanaagsan ayaa noqonaysa qeexitaan aan dhib badnayn. Qeexitaanku waa mid aan mugdi ku jirin shirkadaha soo saara mashaariicda cusub ee tamarta la cusboonaysiin karo, xitaa shaqaalaha ka shaqeeya korontada Washington waxay inta badan u baahan yihiin caawimaad si loo ogaado waxa u qalma iyo wixii aan u qalmin. Way fududahay in la gaadho gabagabo aan sax ahayn oo ku saabsan haddii kheyraad ku yaal California, Utah, Nevada, Wyoming ama Montana ay u qalmaan.
Sidoo kale way adagtahay in la arko ujeedo kasta oo caam ah oo loo adeego iyada oo leh xuduudo juqraafiyeed oo cakiran. Xadka u qalmitaanka juqraafiyeed waxaa loola jeedaa in lagu taageero horumarinta ilaha la cusboonaysiin karo oo si macquul ah ugu dhow macaamiisha Washington. Ujeedadaas waxaa loogu adeegi karaa soohdin fudud oo ku saleysan khadadka gobolka. Tusaale ahaan, soohdinta u-qalmitaanka juqraafiyeed waxaa ku jiri kara dhammaan gobollada Washington, Oregon, Idaho iyo Montana. Tani waxay ka saari doontaa xaleefyada yaryar ee Nevada, Utah, California, iyo Wyoming iyadoo lagu darayo dhinaca bari ee Montana.
← Guddiga Howlaha Guud wuxuu ansaxiyay in ka badan $ 5.4 milyan oo deyn ah oo la siinayo bulshooyinka u baahan Ogeysiiska Fursadda Maalgelinta - Barnaamijka RD & D →